Codsiyada ugufiican ee lagu abuuro filim duubey Android iyo iPhone 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Barnaamijyo la abuurayo slide Way sii kordhayaan baahida loo qabo xaqiiqda ah in qof walba uu dareemi karo inuu yahay xirfadle wax ka beddelaya sawirradooda saameyn gaar ah oo lala wadaagayo "dadweynahooda".
Arrimo kala duwan ayaa saameyn ku yeelan kara xulashada dalabka la adeegsanayo, sida:
la nooca saameynta- Barnaamij kasta oo u dhigma milixdiisu waa inuu bixiyaa tiro badan oo tayo wanaagsan leh, in kasta oo ay iska caddahay in aynaan u malaynaynin in hal saamayn, oo la yaab leh sida ay noqon karto, ay ku filnaan karto abuuritaanka muuqaal waalli ah;
la fududeynta isticmaalka: amarrada iyo aaladda toolbar waa inay ahaadaan kuwo dareen leh si shaqada loogu fududeeyo adeegsadayaasha;
la sahlanaanta wadaagga: ikhtiyaarrada wax wadaagga waa inay ahaadaan meel ay gaari karaan .... guji !!
Maqaalkani, waxaan isku dayi doonaa inaanu siino hage waxtar u leh dhammaan kuwa doonaya inay isku dayaan nasiibkooda codsiyada muqaal ahaan iyagoo sharraxaya astaamahooda, faa iidadooda iyo qasaarooyinkooda. Si arrimaha loo fududeeyo, waxaan u kala qaadeynaa maqaalka saddex qaybood, mid u gaar ah dadka isticmaala Android, mid u gaar ah dadka isticmaala iPhone iyo mid u heellan barnaamijyada jira ee slideshow labadaba Versions
AKHRISO: 30 barnaamij oo lagu tafatiro fiidiyeyaasha isla markaana lagu duubo filimada (Android iyo iPhone)
The app slideshow ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
a) Sawirka Sawirka FX Live:
Shaki la'aan, waa codsiga ugu caansan ee warshadaha leh in kabadan 13 milyan oo soo degsasho ah.
Codsigu wuxuu bixiyaa shaqooyin badan, oo kuu oggolaanaya inaad sawiro soo dhigto, sawir duubeyaal naqshadeyn ah, ku dar animations, dejiso midabbo, saameyn, iyo waxyaabo kaloo badan. Sawirka Sawirka FX Live Waxay leedahay tifaftire sawir aad u fiican, waa la beddeli karaa, waxayna kuu oggolaaneysaa inaad sameysid sawirro tayo sare leh. Intaa waxaa dheer, waa mid aad u macquul ah sidaa darteedna way fududahay in la isticmaalo xitaa kuwa khibrada yar.
Faa’iido darrooyinka waxaa ka mid ah karti la’aanta in la soo saaro kaameradda oo uu socdo codsi, u janjeera in uu shilmo marka ay jiraan faylal aad u fara badan oo furan, iyo la’aanta wareegga sawir toos ah.
labaad) Muqaal sawir leh iyo video sameeye:
Codsigan wuxuu bixiyaa waayo-aragnimo abuuritaan muuqaal-duuba oo runtii sifiican ugu mahadcelinaya isku-darka is-dhexgal dareen leh iyo qalab casri ah.
Muqaal sawir ah waxay bixisaa waxyaabo badan oo saameyn ah, miirayaal iyo looxyo, oo ay weheliso maareyn maareyn ku habboon taas oo ka dhigeysa mid fudud in la abuuro duubeyno tayo leh adoo ku daraya boodhadhyada ku jira galeylka fayllo kala duwan. Isla mar ahaantaana, way adag tahay in lala wadaago fiidiyowyada la kaydiyay; sidoo kale, tayada sawirka ayaa isbadalaysa marka loo eego heerka la xushay.
C)PIXGRAM - Muqaal Muqaal Muqaal ah:
Barnaamijkan slideshow maker ayaa u fududeynaya qof walba inuu soo rogo sawirro, xulo muusigga ay jecel yihiin, ku dar filtarrada iyo saamaynta, abuuro iskiis u duubaan isla markaana uu adduunka la wadaago waana hubaal inuu yahay barnaamijka ku habboon bilowga.
Pixgram waxay kuu ogolaaneysaa inaad keydiso bandhigyada iskeed u socda qaabab kala duwan, waxay leedahay miirayaal aad u fiican, waxayna u baahan tahay adeegsiga muusig shaqsiyeed. Ma noqon karto barnaamijka ugu xirfad badan suuqa, laakiin shaqada ayay qabataa.
dib) Abuuraha bandhigga:
Abuuraha bandhigga kuma raaxeysato sumcadda codsiyada lagu soo bandhigay qodobbadii hore, laakiin waxay runtii siisaa fursado cajiib leh kuwa bilowga u ah sameynta filim duubey: mahadnaq ah is-dhexgal go'aan leh oo dareen leh, waa wax aad u fudud in sawirro la soo rogo, raadiyo iyaga, loo habeeyo ciyaarta loo yaqaan 'playback' random iyo wax ka badan. Waxa kale oo jira qalab loogu talagalay cusbooneysiinta tooska ah ee sawir qaadista, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku darto kuwa cusub.
Dhinaca kale, awood u siinta muuqaalka shaashaddu waxay u egtahay inuu shil galo oo aanu lahayn astaamaha barnaamijyada ku jira isla qaybta ay bixiyaan.
Maalin dhisme waa codsi loogu talagalay tafatirayaasha khabiirka ah waxayna siisaa dadka isticmaala xirmo qani ku ah muuqaalka, oo ay weheliso menu aad u fiican oo la isku habeyn karo iyo qaabka isdhexgalka. Codsiga waxaa loo isticmaali karaa khadka tooska ah waana suurtagal in la abuuro duubo tayo leh, iyadoo la adeegsanayo hawlo kala duwan si loo siiyo Muqaalladaada Muqaallada taabashada gaarka ah.
Nasiib darrose, Dayframe waxay u egtahay inay ku daadiso batteriga qalabka la adeegsanayo waqti aad u gaaban waana ku adkaan kartaa bilowga inay adeegsadaan.
The app slideshow ugu fiican ee iPhone
PicPlayPost waa codsi dareen leh oo kuu oggolaanaya inaad si fudud isugu dhejiso sawirro, fiidiyowyo, muusig iyo GIFs, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee nooceeda ah. Codsiga waa loo heli karaa qof walba wuxuuna bixiyaa shaqooyin wax ku ool ah si uu si fudud ugu biiro fiidiyowyada iyo sawirada.
PicPlayPost Waxay leedahay muuqaal dhexdhexaad ah oo macquul ah oo kuu oggolaanaya inaad geliso illaa 9 sawir, GIF ama fiidiyowyo mashruuc kasta oo ka dhig iyaga kuwo aad u soo jiita xulasho wanaagsan oo saameyn ku leh xallinta sare.
Muusigga go aanku xadidan yahay ee Muusiga iyo codsashada calaamadeynta muraayada, inkasta oo la beddeli karo, ma ahan kuwo aad u fiican.
SlideLab waxay kuu ogolaaneysaa inaad sawirrada ugu beddesho fiidiyowyo dhowr daqiiqadood gudahood adoo gelinaya muusikada la dhisay ama muusikada ku jirta barnaamijka. Muuqaallada duubey ee la abuuray ayaa lagu keydin karaa aaladda mobilada, iyadoo la ilaalinayo cabirkooda asalka ah, ama lagu wadaagi karo astaamahooda bulsheed ee horey loogu waafajiyay xallinta looga baahan yahay shabakadda bulshada ee ay doonayaan inay la wadaagaan. Codsigu wuxuu kaloo bixiyaa miirayaal kala duwan oo aad ku dalban karto sawirradaada.
Cilladda kaliya SlideLab ma ogola in muusikada laga isticmaalo iTunes in lala wadaago Facebook O Instagram. Wali waa codsi gaar ah.
C) Agaasimaha Soo Bandhigida Sawirka:
Agaasimaha bandhigga ogolaanaya ahiPhone / iPad si aad u noqotid goob loogu talagalay filim duubey, adoo adeegsanaya sawirrada ku keydsan qalabka. Tirada saameynta la bixiyay waa mid xiiso leh, gaar ahaan tixgelinta in codsigu kuu oggolaanayo inaad ku keydiso duubeyno gudaha ah HD xitaa shaashad buuxda. Intaa waxaa dheer, codsigu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la wadaagto duubeyaasha shabakadaha bulshada dhib la'aan.
Agaasimaha bandhigga Waxay leedahay tifaftire sawir aad u fudud oo dareen leh oo waliba kuu ogolaanaya inaad abuurto fiidiyowyo muusiko ah.
Taas bedelkeeda, xawaaraha wax-qabadka waxaa wax u dhimaya xusuustaiPhone. In kasta oo ay taasi jirto, haddana weli waa muran-bixiye filim-sameeyaha ugu fiican ee la heli karo macruufka.
Picflow Ma lahan dhammaan howlaha ay barnaamijyada kale soo bandhigaan, laakiin waa codsi si fudud loo maareeyo loona xakameeyo marka la sameynayo duubeyno. Barnaamijkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dejiso waqtiga loo maqli karo ee sawir kasta oo la soo dhejiyo ka dibna u diyaarso si aad ula socoto muusikada asalka ah ee aad dooratay oo sidoo kale laga soo rogi karoiPod.
PicFlowDaqiiqado yar gudahood, waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto bandhigyo firfircoon oo firfircoon si aad ula wadaagto Facebook ama Instagram, adoo ku dhajinaya sawirada isjiidjiid iyo qanjaruufo oo aad codsaneyso mid ka mid ah 18 wareejinta la heli karo.
Nasiib darro nooca bilaashka ah waa mid xadidan oo fayl-gareynta fiidiyowgu sii socon maayo 30 FPS.
iMovie waxay bixisaa tiro wax ku ool ah oo astaamo ah iyo heer tayo sare leh, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee lagu abuurayo bogagga 'slideshows' iPhone. Codsiga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad bedesho codka cajalad kasta oo aad sameysid waxayna bixisaa noocyo badan oo ah mawduucyada filimka, kala-guurka, saamaynta dhawaaqa iyo cinwaannada. Sababahan awgood, isticmaaleyaal badan ayaa iska indhatira codsiyada kale waxayna u isticmaalaan iMovie dhammaan baahiyaha la xiriira tafatirka fiidiyowga ama abuurista duubey.
Sababaha sababta barnaamijkan loogu talagalay iPhone Waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican abuurista filim duubo. Dhanka kale, codsigu ma ahan mid aad u jilicsan oo aad u adag in wax laga qabto bilowga.
AKHRISO: Abuur sawir videos, music, saamaynta sida slideshow sawir ka PC
Barnaamijyada Muusikada ugu fiican ee Android iyo iPhone
Waxaa loo heli karaa labada qalab Android in loogu talagalay iPhone , VivaVideo wuxuu leeyahay nooc aasaasi ah oo aad u isticmaali karto soona dejiso bilaash. Inta aad tafatirka sawiradaada ka dooran karto mid "qaabka pro" dabacsanaan weyn iyo "hab dhaqso ah" nooc deg deg ah oo otomaatig ah. Kaamirada ku jirta arjiga ayaa kuu oggolaaneysa inaad duubto fiidiyowyo inta aad codsaneysid wax ka badan 60 saameyn gaar ah. Markaas waxaad ku dari kartaa kala guurka, saamaynta dhawaaqa, iyo xitaa nuqul video aad samaysay.
Markii aad ka baxdo barnaamijka, isbeddeladaada si otomaatig ah ayaa loo keydin doonaa waxaadna si fudud isugu dari kartaa fiidiyowyada adigoo adeegsanaya muuqaalka sheekada
Nasiib darrose, nooca bilaashka ah ee barnaamijku wuxuu ka kooban yahay astaamo farogelin ah oo ku saabsan fiidiyowyada, waxaa ku jira xayeysiisyo badan, iyo xadka xaddidan shan-daqiiqo ah. Si loo baabi'iyo jahwareerkaas, waa inaad iibsataa nooca pro-ga ah $ 2,99,3.
Waxaa heli kara labada isticmaale Android labada isticmaale iPhone oo waxay siisaa tan xulashooyin ah si aad wax uga beddesho muuqaalo, sawirro, fiidiyowyo, iyo in ka badan. Movavi Waa bilaash oo fiidiyowgeeda iyo maqalkeeduba wuxuu bixiyaa khibrad xirfadeed, iyo sidoo kale awoodda lagu daro saameyn tayo sare leh oo lala shaqeeyo qaabab badan oo fiidiyoowyo kala duwan ah. Waa suurtagal in la caadiyeeyo codka, si toos ah looga duubo shaashadda si loo qabto wicitaannada fiidiyowga ama waxqabadyada kale ee dhaca waqtiga dhabta ah ee qalabkaaga iyo xitaa si dijitaal ah u samee ama dib ugu hagaaji sawir si fudud.
Waxa kale oo jira astaamo kale oo qabow sida awoodda lagu abuuri karo qoraal-hoosaadyo khaas ah. Movavi Waxay sidoo kale ku jirtaa nooc la bixiyay, oo xulashadiisu tahay premium ka bax $ 59,95. Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa ku adkaatay qalabka inay adeegsadaan mooyee inay yihiin kuwa aqoonta u leh cilmiga casriga ah.
Waa la heli karaa labadaba Android in loogu talagalay macruufka waana codsi ku habboon abuurista bandhigyo loogu soo bandhigayo 'Instagram newsfeed' maxaa yeelay waxay u qaabeysaa fiidiyowga laba jibbaaran. Si kastaba ha noqotee, illaa maanta, waxay leedahay ikhtiyaar qaab muuqaal ah oo ku habboon Instagram iyo IGTV. Nooca bilaashka ah ee barnaamijkan wuxuu xaddidayaa muqaal sawir laba jibbaar ah illaa 30 ilbiriqsi iyo slideshow sawir toosan illaa 11 ilbidhiqsi, taas oo ah mid aad u dhib badan.
Isku soo wada duuboo, MoShow way adkaan doontaa in la isticmaalo iyada oo aan lagu maalgelin nooca pro. Codsiga MoShow xeeb dhameystiran $ 5,99 bishii ama $ 35,99 sanadka.
Sidaad si sahal ah u qiyaasi karto, waxaa jira codsiyo badan oo loogu tala galay tafatirka sawirada iyo fiidiyowyada oo inta badan ay adagtahay in la fahmo oo la doorto kuwa ku haboon baahiyaheena oo aan wada tilmaami karno.
Waxaan isku daynay; Hadda waxa kaliya ee haray waa in loo dhaadhaco ganacsiga!
AKHRISO: Codsi si looga abuuro sheekooyin sawirro iyo fiidiyowyo muusig (Android - iPhone)
Ku martiqaad xaflad farsamo saaxiibbo ama qoys wada hadal wicitaan kooxeed ah
Daaqado faylal ah oo la jaray, la isdulsaaray, ama leysku dhejiyay Windows 10